Roller Blind lamba dia lasa maoderina ho fiarovana ny masoandro amin'ny indostrian'ny ankehitriny. Toy ny tombony azo avy amin'ny fampandehanana mora, tsara tarehy, maharitra ela velona ary mety tsara amin'ny toerana samihafa. Noho ny filàna filàna angovo sy tsy miankina ...Hamaky bebe kokoa »
R + T World's Trade Trade Same ho an'ny Roller Shutters, Doors / Gates ary Sun Protection Systems
Ny ETEX dia hanatrika ny R + T 2021 Stuttgart miaraka amin'ny trano heva natao hampisehoana amin'ny mpanjifantsika ny endrika farany sy ny fanavaozana farany natao ho an'ny lamba jamba. Misy maherin'ny 200 ny famolavolana mainty vita amin'ny blackout, translucent, jacquard, sunscreen, fitaovana ampiasaina. ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fifantohana ETEX dia mifototra amin'ny fanamboarana lamba sy fanamboarana lamba jamba. Hatramin'ny niorenany dia nohamafisintsika ho ny kolontsainan'ny orinasa ny kalitao voalohany amin'ny asa rehetra ary tazontsika ho toerana iainanay. Mba hampifanarahana ny fepetra takian'ny fepetra iraisam-pirenena ...Hamaky bebe kokoa »